कुवेत पुगेकि चेली भन्छिन्, बिदेशमा नेपाली दाजुभाइले सहयोग गर्ला भन्दा लभ पो गरम भन्छन! – Sidha Kura
मुख्य पृष्ठ /रोचक/कुवेत पुगेकि चेली भन्छिन्, बिदेशमा नेपाली दाजुभाइले सहयोग गर्ला भन्दा लभ पो गरम भन्छन!
विदेशबाट फर्केकी आमाजु दिदीले कुवेतमा काम राम्रो छ भनेपछि पार्वतीले विदेश जाने सोच बनाउनुभयो । पार्वतीका तीन जना जेठानी देउरानी त अहिले पनि विदेशमा छन् । त्यसैले उहाँले रोजगारीका लागि विदेश कसरी जाने भन्ने कुरा कसैलाई सोध्नु पर्दैनथ्यो । छनलाई पार्वती र उहाँका श्रीमान् मुकुन्द अधिकारीको त्यति धेरै ऋण पनि थिएन । जग्गा बन्धकीमा राखेको ४० हजार रुपैयाँ तिर्नु थियो ।”
सुनको जलप लगाएको ‘फलाम’को गहना सुन पसलमा राख्दै पैसा लिदै गरेपछी …